Deg Deg: Qarax Culus Oo Gali-Gilay Magaalada Muqdisho Oo Hada Dhacay + Khasaaraha - Wargane News
Home Somali News Deg Deg: Qarax Culus Oo Gali-Gilay Magaalada Muqdisho Oo Hada Dhacay +...
Qarax dhawaq culus ayaa goor dhow ka dhacay koontaraalka ugu horreeya ee laga galo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee caasimaadda Muqdisho, sida laga soo xigtay goobjoogayaal.
Dhawaqa qaraxa ayaa laga maqlay qeybo ka mid ah caasimadda Muqdisho ,iyada la arkayay uuro cirka isku shareertay – waxaana ka soo baxaya warar kala duwan.
“Qarax hal mar ayaan jugtiisa ka war helnay , balse waxaa ka dhashay inay gubatay kaalin shidaal ee ku dhow hotelka Afrik oo ku yaalla koontaraalka laga galo garoonka diyaaradaha ee KM4.” ayuu yiri qof ku dhowaa goobta uu qaraxa ka dhacay oo la hadlay Hiiraan Online.
Ma cadda ilaa hadda nooca uu qaraxa ahaa, wallow wararka soo baxaya ay sheegayaan in gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa inuu ka dhashay, sidoo kale waxaan ilaa hadda la ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxa.
Ciidammada amniga oo markiiba gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa xiray waddooyinka laga soo galo goobta uu ka dhacay, mana jirto ilaa hadda cid sheegatay mas’uuliyada qaraxaa.
Wuxuu ku soo aadday xilli muddooyinkii dambe nabadgalyada caasimadda Muqdisho ay wanagsaneyd, howlgallo joogto ahna ay sameyn jireen ciidammada nabadgalyadda.